ड्र्यागन बल Z मा शीर्ष गोहान सर्वश्रेष्ठ क्षणहरू — DBZ Store
ड्र्यागन बल Z मा शीर्ष गोहान सर्वश्रेष्ठ क्षणहरू
महाकाव्य लडाईहरू, हृदयविदारक बलिदानहरू, र अन्य क्षणहरू हाम्रो स्मृतिमा ट्याटू रहन्छन्। ड्र्यागन बल Z 90 र 00 को दशकमा जनताको बीचमा सबैभन्दा ठूलो पप संस्कृति घटना मध्ये एक बन्यो। ती सबै वर्षहरूमा, यसको प्रसिद्धि मात्र फैलिन जारी रह्यो जब एनिमे विश्वका बाँकी राष्ट्रहरूको स्क्रिनमा पुग्यो, जसले हामीलाई 291 एपिसोडहरूमा सामूहिक स्मृतिमा कुँदिएका सबै प्रकारका क्षणहरू ल्यायो। यो ड्र्यागन बल शृङ्खलाको सीधा उत्तरकथा हो, जसले अकिरा तोरियामाको मङ्गाका बाँकी ३२४ अध्यायहरूलाई रूपान्तरण गर्छ।
अविस्मरणीय झगडा, हृदयविदारक बलिदान, हास्य क्षणहरू, र भावनात्मक दृश्यहरूले हाम्रो आँखामा आँसु ल्यायो।
विश्वभरका फ्यानहरूले ड्र्यागन बल जेडलाई मन पराए, विशेष गरी यस सिक्वेलमा गोहान मुख्य पात्रको रूपमा थिए। यहाँ गोहानका केही अविस्मरणीय क्षणहरूको संकलन छ। तपाईको मनपर्ने कुन हो?
उसले Super Saiyan2हासिल गर्छ (र सेललाई हराउँछ)
Dragon Ball Z ले आफ्ना पात्रहरूलाई बिभिन्न तरिकामा विजय प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। यो एक एक्शन एनिमे भएको हुनाले, अकिराले झगडाहरूलाई नीरस नबनाइ कसरी बनाउने भन्ने बारे रचनात्मक हुनुपर्दछ।
कहिलेकाहीं यो Dragon Ball Z को सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिहरू सुपर सायान रूपान्तरणहरू र कसले पहिलो पटक हासिल गर्यो भनेर श्रेय दिन सजिलो हुन्छ। गोकु पहिलो भएको हुनाले र प्राय: यस सम्बन्धमा प्याकको नेतृत्व गर्ने भएकोले, गोहानलाई पहिलो सुपर साइयान २ भएको देख्न पाउँदा खुसी लाग्यो। जब तपाईं गोकुको बच्चा हुनुहुन्थ्यो त्यसको बारेमा सोच्दा अर्थ लाग्छ। तिनीहरूले के भन्छन्? जस्तै बुबा, जस्तै छोरा।
यो नयाँ शक्ति खेर गएको थिएन, र सेल जुनियर र त्यसपछि सेलको विनाश गोहानको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो। यस गोहान बनाम सेल लडाईमा सुपर सैयान २ गोहान ड्र्यागन बलको यस सिक्वेलको बारेमा सबै प्रशंसकहरूले मन पराएको कुरा थियो।
Raditz विरुद्ध Gohan को लडाई
Raditz पृथ्वीमा आइपुग्दा ड्र्यागन बल Z सुरुदेखि नै यसको पूर्ववर्ती भन्दा धेरै परिपक्व छ। उहाँ एक नयाँ खलनायक हुनुहुन्छ, र ड्र्यागन बलको अघिल्लो सिजनमा अन्य खलनायकहरू भन्दा फरक, र्याडिट्ज एक वास्तविक बदमाश हो। उसले गोकुलाई धम्की दिन्छ र त्यो भन्दा माथि, उसको परिवार। यो खलनायक एक ठूलो खतरा हो, र उसले पिकोलो र गोकुलाई सँगै लड्न बाध्य पार्छ। हामीले पिकोलोलाई सन गोकुको पुरानो शत्रुको रूपमा सम्झन्छौं, तर पछि तिनीहरूले र्याडिट्जको बिरूद्ध लडाईमा सँगै गठबन्धन गरे। पिकोलोले प्रक्रियामा हात गुमाउँछ।
सफल हुनको लागि गोकुले आफूलाई त्याग गर्नुपर्छ। यस दर्दनाक मुठभेडको समयमा, गोहान अझै एक बच्चा छ, तर उसले Raditz लाई ठूलो झटका दिन्छ जसले उसको उज्ज्वल भविष्यको भविष्यवाणी गर्दछ। यो एक अविश्वसनीय क्षण थियो। दर्शकहरूलाई थाहा थियो कि विभिन्न परिस्थितिहरूमा, गोहानले Raditz लाई पराजित गर्थे।
उहाँ नामेक ग्रहमा जीवित हुनुहुन्छ
यो Dragon Ball Z मा एउटा महत्त्वपूर्ण मोड हो। पात्रहरू ड्र्यागन बलहरूको खोजीमा नामेक ग्रहमा उड्छन्। पहिलो पटक, ड्र्यागन बलले पृथ्वीको सिमाना छोड्यो। त्यस क्षणमा, फ्रिजा यस मुठभेडमा सबैभन्दा ठूलो दुष्ट शक्ति हो। अझै पनि, Frieza को सेना र Ginyu को सेना को उच्च सदस्यहरु महत्वपूर्ण हानि को लागी जिम्मेवार छन्।
गोहानको दबाइएको क्रोध र लुकेको क्षमता सधैं युद्धमा बाहिर आयो। यो प्रभावशाली थियो कि उहाँ यी सबै शत्रुहरू विरुद्ध बाँचे। क्रिलिन र भेजिटा सहित अरूको पनि मृत्यु भयो। किड गोहान बाँचे, र यसले उसको चरित्र र ऊ कति शक्तिशाली छ भन्ने बारेमा धेरै कुरा बताउँछ। त्यसबेलादेखि, हामीलाई थाहा छ गोहानसँग धेरै क्षमता छ।
गोहानसँग स्पटलाइट छ
DBZ को पहिलो एपिसोडमा, एनिमले संकेत गर्छ कि कसरी गोहान आफ्नो बुबा भन्दा बढी शक्तिशाली हुनेछ र मुख्य पात्र बन्नेछ। सेलको हातबाट गोकुको दोस्रो पटक मृत्यु भएपछि ड्र्यागन बल जेडले यो सपनालाई पहिचान गर्छ।
जब यो हुन्छ, गोकु अन्य संसारमा रहन्छ, र गोहान यस एनिमे सिजनको नयाँ केन्द्र बिन्दु बन्छ, जहाँ उसले ग्रेट साइयामनको रूपमा सडकहरूमा हावी हुन्छ र आफ्नो शक्तिलाई सम्मान गरिरहन्छ। शृङ्खलाको यस भागमा, गोहान ड्र्यागन बल जेड ओपनिङको मुख्य पात्र बन्छन्।
गोहानले लसुन जुनियरलाई आक्रमण गरे।
गोहानले बाल्यकालमा लडाइहरूमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका थिए, तर जब उहाँ आफ्नो बुबासँग तुलना गर्नुहुन्छ उहाँ अनिवार्य रूपमा कम हुन्छ। जब हामी गार्लिक जूनियरको बारेमा कुरा गर्छौं, हामी ड्र्यागन बल चलचित्रको कारणले सबैभन्दा धेरै सम्झिने खलनायकलाई उल्लेख गर्छौं, तर फ्रिजाको पराजय पछि फिलर सागामा उसले पनि भूमिका खेल्छ।
ती मध्ये दुईवटा अवसरहरूमा गोहानले चेसन जूनियरको सामना गर्छन्। दोस्रो भिडन्तमा ऊ विजयी हुन्छ। पिकोलो र गोहान यस खलनायक र उसको स्पाइस केटाहरू विरुद्धको लडाईमा नेता बन्छन्। यो सबै जब संसार गार्लिक जूनियरको कपटी ब्ल्याक वाटर मिस्टको शिकार हुन्छ।
गोहानले Z तरवार लिन्छ
ड्र्यागन बलमा, खलनायकलाई छायाबाट बाहिर आउन धेरै समय लाग्दैन। सबै बिभिन्न प्रकारका खतराहरू सधैं पृथ्वीमा आक्रमण गर्दैछन्, र ती सबैसँग रहन गाह्रो छ। अझै, Majin Buu सँग श्रृंखलामा सबैभन्दा ठूलो विरोधी र खतराको शीर्षक छ। हाम्रा नायकहरूले बुउलाई हराउन विभिन्न रणनीतिहरू प्रयोग गर्छन्।
केहि समय को लागी, यो सफलता को बाटो गोहान को प्रशिक्षण थियो जस्तो देखिन्थ्यो। गोहानले आफूलाई Z तरवार प्रयोग गर्न योग्य साबित गर्छ, पुरातन काईलाई मुक्त गर्छ, र पावरअप प्राप्त गर्दछ।
पिकोलोले गोहानलाई नाप्पाबाट बचाउँछ
ड्र्यागन बल जेड अचम्मका क्षणहरू र अविश्वसनीय युद्धले भरिएको छ es, तर गोहानको जीवन बचाउन पिकोलोको भावनात्मक बलिदान श्रृंखलाको निर्विवाद हाइलाइट बनेको छ। हो, यो दयालु कार्यले उहाँको बारेमा धेरै बोल्छ किनकि उहाँ खलनायक हुनुहुन्थ्यो, तर यो कार्यले गोहानको बारेमा पनि धेरै कुरा बताउँछ।
पिकोलोलाई थाहा छ कि गोहान पृथ्वीको भविष्य हो र उसको प्रशिक्षुको अस्तित्व आवश्यक छ, उसको आफ्नै भन्दा पनि। यो गोहानको पूर्ण क्षमताको प्रमाण हो। पिकोलोको बलिदानले मात्र गोहानलाई धेरै काम गर्न प्रोत्साहन दिन्छ।
गोहानले बोज्याक र तिनका भाडाका सैनिकहरूलाई नष्ट गर्छ।
धेरै जसो ड्र्यागन बल जेड चलचित्रहरू ग्राउन्डब्रेकिंग छैनन्, तर तिनीहरू प्रायः शानदार लडाईहरू र अत्यधिक खलनायकहरू देखाउँछन्। ड्र्यागन बल चलचित्रहरू रमाइलो हुन्छन्, तर तिनीहरूमध्ये केहीमा दोहोरिने संरचना हुन सक्छ जसमा मुख्य शत्रुलाई पराजित गर्ने गोकु हो।
तर, त्यहाँ बोज्याक अनलिस्ड नामको फिल्म छ। यो हेर्न लायक छ किनकि यो पछिको जीवनमा गोकुको समयमा हुन्छ। यस चलचित्रमा, गोहान बोज्याक र उनका ग्यालेक्टिक सिपाहीहरूलाई नष्ट गर्ने नायक हुन्। यदि गोहान नायक भएको भए DBZ जस्तो हुन सक्थ्यो।
गोहानले भविष्यका ट्रंकहरूलाई प्रेरित गर्छ
Future Trunks को उपस्थितिले Dragon Ball Z लाई पूर्ण रूपमा आधारभूत रूपमा परिवर्तन गर्दछ, र समय यात्रा अचानक दैनिक घटना बन्छ। फ्यूचर ट्रंक्स फ्यान-मनपर्ने पात्रहरू मध्ये एक हो, र उसको कथाले समय यात्रा अघि उसको कष्टप्रद उत्पत्तिको बताउँछ। उहाँ एक वैकल्पिक वास्तविकताबाट हुनुहुन्छ जहाँ सब्जीहरू अनुपस्थित छन्, जसको अर्थ उनीहरूले वास्तविकतामा भएका सबै तरकारी र ट्रंक्स क्षणहरूलाई दुबै भागहरूमा धेरै प्रशंसा गरिन्छ।
यदि फ्यूचर गोहानले उसलाई आफ्नै टाइमलाइनमा मार्गदर्शन नगरेको भए भविष्यका ट्रङ्कहरू उहाँ को हुनुहुन्नथ्यो। यो जडान भविष्य ट्रंकको सुपर सैयानमा प्रारम्भिक रूपान्तरणको कारण पनि हो। निस्सन्देह, उहाँ गोहानको फरक संस्करण हो, तर ट्रंक्स र गोहान मात्र उनीहरूको टाइमलाइनमा बाँकी पात्रहरू हुन्।
सुपर बुउ लड्दै
माजिन बुउ ड्र्यागन बल जेडका खलनायकहरू मध्ये एक हो, जसको डरलाग्दो प्रतिष्ठा छ कि काई पनि उनीसँग डराउँछन्। बुउ विभिन्न रूपान्तरणहरू मार्फत जान्छ र नायकहरूको शक्तिशाली संयोजनसँग लड्छ। ओल्ड काईको अन्तिम विकासको अनुभव गरेपछि सुपर बुउलाई हराउने गोहानको क्षमतामा उच्च आशा राखिएको छ।
गोहानको माजिन बुउसँगको पहिलो झगडा ड्र्यागन बल जेड प्रशंसकहरूका लागि मनपर्ने क्षण हो। यसले गोहानको अन्तिम रूपको उपस्थितिलाई हाइलाइट गर्दछ, जसलाई प्रशंसकहरूले रहस्यमय गोहानको रूपमा उल्लेख गर्छन्। गोहानको आगमन, सुपर बुउलाई मार्ने वाचा र आगामी युद्ध महाकाव्य हो। तर त्यो यसको बारेमा हो।
सुपर बूसँग गोहानको अन्तिम लडाई ड्र्यागन बल जेडको उत्कृष्ट लडाइहरू मध्ये एक हो, र हामी गोहान हाम्रो संसारलाई बचाउन तयार छ भन्ने महसुस गर्छौं। दुर्भाग्यवश, गोहान सुपर बुउको लागि इन्धन बन्छ, जसले यस खलनायकलाई पृथ्वीका अन्य नायकहरूको लागि अझ ठूलो खतरा बनाउँछ।
ड्र्यागन बल जेड एनिमको प्रकार हो जुन कहिलेकाहीं दोहोर्याउन सकिन्छ, तर झगडा र षड्यन्त्रले यसको लागि बनाउँछ। यसबाहेक, मानिसहरूले बच्चा हुँदा ड्र्यागन बल हेर्न थाले, र तपाईंले आफ्नो बाल्यकालमा हेर्नुभएको शोको त्रुटिहरूलाई बेवास्ता गर्न सजिलो छ। अझै पनि, ड्र्यागन बलले पुस्ताहरू पार गरेको छ, र हामी यसलाई यसको लागि माया गर्छौं।
ड्र्यागन बलमा धेरै पात्रहरू सम्भावित छन्, र तिनीहरूमध्ये केहीले कहिले पनि आफ्नो कौशल देखाउने मौका पाउँदैनन्। तपाईंसँग क्रूर शक्ति हुन सक्छ, तर यो एक ठोस रणनीति विकास गर्न, एक टोलीको रूपमा सँगै काम गर्न, र आफ्नो विरोधीको कमजोरीहरू पहिचान गर्न महत्त्वपूर्ण छ। कुरा हो, गोहानसँग यो छ। शृङ्खला बढ्दै जाँदा, विभिन्न खलनायकहरूलाई पराजित गर्दा यी क्षमताहरू काममा आउँछन्।
गोहान धेरै विनम्र र विचलित गर्ने पहिलो हो। उनी आफ्नो उपलब्धिको जिम्मेवारी अरूलाई लिन दिन पाउँदा खुसी छन् र गुमनामता पछि लुकेर बस्छन्। अत्याधिक अहंकारले उसको प्राथमिकताहरूमा साँच्चै गडबड हुन सक्छ, र गोहानले यस्तो प्रशंसाको वास्ता गर्दैनन् भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौं।
गोहान एउटा अचम्मको पात्र हो, र हामी आशा गर्छौं कि तपाईंले ड्र्यागन बल जेडको समयमा उहाँका शीर्ष क्षणहरूको सूचीको आनन्द लिनुभयो।